VIDEO: Maxay yihiin Walxaha Iftiimaya Ee lagu arkay Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale?
Thursday November 14, 2019 - 21:00:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
(Rating 1.0/5 Stars) Total Votes: 6
Dhammaan magaalooyinka iyo gobollada dalka Soomaaliya waxaa caawa lagu arkay waxyaabo iftiimaya oo cirka duulaya arrinkaas oo dad badan ay layaabeen.
Salaadii Maqrib kadib ayaa caawa la arkay waxyaabo lamoodo xidigo oo isku taxan kuwaas oo joog meel dhaxaad ah ku duulaye "caawa waxaan aragnay wax aan layaabnay xidigo aad u iftiimaya oo raxan raxan usocda ayaa cirka nooga muuqday" sidaas waxaa yiri qof la hadlay SOMALIMEMO.
Walxahan cirka lagu arkay ayaa ka duwanaa dayax gacmeeyadii caadiga ahaa ee marmarka qaar la arki jiray waxayna ku duulayeen fogaan meel dhaxaad ah balse ma gaarsiisnayn xidigo.
Soomaaliya oo kaliya laguma arkine dhammaan wadamada khaliijka iyo qaaradda Afrika ayaa lagu arkay balse waa ku kala horreeyeen habeenkii khamiistu soo gelaysay ayaa wadamada qaar lagu arkay walxahan iftiimaya.
Maxay yihiin waxyaabaha iftiimaya ee la arkay?.
Dad badan ayaa ajsaamtan iftiimaysa ku tilmaamay kuwa mucjiso rabbaani ah iyagoo aaminsan in aysan aheyn wax bani'aadam sameeyay marka loo eego tiradooda oo badan, iftiinka ay bixinayaan iyo qaabka ay isugu tixanyihiin.
Sida dhabta ah walxaha iftiimaya ee la arkay waa dayax gacmeedyo ay hawada udirtay shirkad lagu magacaabo SpaceX Starlink oo laga leeyahay dalka Mareykanka.
Maalintii arbacada ayay shirkaddan oo fadhigeedu yahay gobolka California waxay hawada udirtay illaa 60 dayax gameed oo ay ugu magac dartay Falcon9.
Shirkadda SpaceX Starlink waxay warbixinteeda ku sheegtay in marka ay guulaystaan tijaabooyinkan ay hawada ugu dirtay 60-ka dayax gacmeed ay macaamiisheedu heli doonaan Internetka Xawaara sare leh.
Mas'uul u hadlay shirkaddan qaabilsan dhanka Satellite ayaa telefeshinka Alhurra ee mareykanka laga leeyahay u sheegay in 60 dayax gacmeed ay si tijaaba ah ugu direen hawada ayna ku wareegayaan caalamka iyagoo xambaarsan muuqaallo qurux badan sida uu hadalka u dhigay.
Baraha bulshadu ku wada xiriirto ayaa lagu faafiyay muuqaallo muujinaya ajsaam iftiimaysa oo is hareer socda arrinkaas oo dadku siyaaba kala duwan uga hadleen.
Hoos Ka daawo Video lagasoo duubay gudaha Mareykanka saacado kadib markii dayax gacmeedkan hawada loo diray
Weerar Askar Kenyaan ah lagu dilay oo markale ka dhacay Koonfurta Soomaaliya.
Weerar 5 Askari Kenyaan ah lagu dilay oo ka dhacay Koonfurta Soomaaliya.